BUDDHIST TERMS' Dictionary: WORLD SYSTEM - စက္က၀ါဠ
WORLD SYSTEM - စက္က၀ါဠ
စက္က၀ါဠ (Cakkavᾱḷa) - စကြ၀ဠာ၊ လောကဓာတ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွင့်ကျမ်းများအဆိုအရ - သမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်း၊ ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းနှင့် မြင့်မိုရ်တောင်တို့ ပါဝင်သော လူ, နတ်, ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါတို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုကို စကြ၀ဠာဟုခေါ်သည်။ ထိုစကြ၀ဠာကို ၀န်းရံနေသော တောင်တန်းကြီးကိုလည်း စကြ၀ဠာတောင်ဟု ခေါ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော စကြ၀ဠာပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိသည်။
Universe; cosmological entity
According to Buddhist sources, the four great oceans, the four great islands (continents) and Mt. Meru, where men, devas and brahmas live, constituteaCakkavᾱḷa. The whole is bounded byamountain range, which is called Mt. Cakkavᾱḷa Pabbata. There are innumerable number of such Cakkavᾱḷas.